12 | May | 2018 | Danya Wadi
The live broadcast of tun tun’s vows. Mahathir Mohamad as the seventh prime minister of the state palace
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေ အဆုံးသတ်စေရေး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီက သမ္မတအိမ်ဖြူတော်ရှေ့မှာ ကချင်၊ မြန်မာနဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေ ၂၄နာရီကြာ ထိုင်သပိတ်ဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပနေကြပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ထိုးစစ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့် သိန်းနဲ့ချီ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေထွက်ပြေးနေရတဲ့ အခြေအနေကို အမေရိကန်အစိုးရသာမက ပြည်သူတွေပါ သိရှိအောင် အခုလို ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်တယ်လို့ ဦးဆောင်စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။
“There will be 10 ministries, and all parties in Pakatan Harapan will be represented in the Cabinet. 1. Finance 2. Home Affairs 3. Defence 4. Education 5. Rural Development 6. Economy 7. Public Works 8. Transport 9. Multimedia, Science & Technology 10. Foreign” -PM Tun Mahathir. NST Online news